कहाँ हराए सुन तस्करीका यी ठूला माछा ? के भन्छ छानविन समिति ?
ARCHIVE, POLITICS » कहाँ हराए सुन तस्करीका यी ठूला माछा ? के भन्छ छानविन समिति ?
काठमाडौं - ३३ किलो सुन तस्करी तथा सनम शाक्य हत्या प्रकरणको अनुसन्धान गर्न गठन गरिएको उच्चस्तरीय छानवीन समीतिको म्याद सकिन लाग्दा त्यसले ठूला माछालाई भने जोगाएको छ ।
नेपालमा सामासुङ कम्पनीको सामानहरू बेच्ने मुख्य एजेण्ट दिपक मल्होत्रादेखि केही पूर्वमन्त्री तथा तत्कालिन समयमा भन्सार प्रमुख रहेका लोकमानसिंह कार्कीसम्म जोगिएका छन् । भुजुङ गुरुङ पक्राउ परे पनि कालु मनाङ्े भनिने कालु गुरुङ, नेकपाका केही नेता र तिनका कार्यकर्ताहरू समेत जोगिएका छन् ।